Waa maxay Soo Jeedinta Qiimaha Gaarka ah?
Sida Loo Sameeyo Soo Jeedin Qiimo Weyn
Sabtida, Juun 9, 2018 Isniin, Disembar 17, 2018 Douglas Karr
Mid ka mid ah dagaalada joogtada ah ee aan kula halgamayo shirkadaha ayaa ah inaan joojiyo fikirka waxay qabtaan oo bilow inaad ka fikirto sababta dadku u isticmaalaan wax soo saarkooda ama adeeggooda. Waxaan ku siin doonaa tusaale deg deg ah… maalinba maalinta ka dambeysa, waxaad i heli doontaa aniga oo duubanaya oo aan tafatirinaya boodhadhka, qorista lambarka is dhexgalka, hirgelinta xalalka dhinac saddexaad, iyo tababbarka macaamiishayda Blah, blah, blah… taasi maahan sababta ay dadku qandaraasyadayda ugu adeegaan. Waxay ka heli karaan adeegyadan midkood Fiverr boqol doolar shaqo. Macaamiishaydu way i shaqaaleeyaan maxaa yeelay waxaan awood u leeyahay inaan beddelo dadaalkooda suuq-geynta dijitaalka ah isla markaana aan u kobciyo natiijooyinkooda si mug leh maalgashi yar.
Waxaa jira isbarbardhig aan inta badan isticmaalo. Waxaan haystaa gaari aan u soo kaxeeyo dayactir bil kasta ama sidaas. Waxay tahay inaan gaarigayga ku haayo xaalad wanaagsan oo aan dib ugu sii laabto shaqada. Ma ihi makaaniggaas. Hadda, haddii aan jeclaan lahaa in gaarigeyga wax laga beddelo oo la casriyeeyo si aan ugu guuleysto tartamada, miyaan u keeni lahaa makaaniggaas? Maya. Hay'addeydu maahan dukaan beddelka saliidda, waa kan ku guuleysto tartanka dukaanka.
Waxay u egtahay mid fudud, sax? Maya… maxaa yeelay shirkaduhu waxay u maleynayaan inay u dukaameysanayaan wax ka beddelka saliidda laakiin runtii waxay u baahan yihiin waa inay ku guuleystaan ​​tartanka.
Waa maxay Soo-jeedinta Qiimaynta?
Sidoo kale loo yaqaan Soo-jeedino Qiimo Gaar ah (UVP), soo-jeedintaada qiimaha waa hadal kooban oo koobaya faa'iidooyinka adeegyada aad bixisay iyo sidoo kale sida aad uga soocan tahay tartamayaashaada.
Talo Pro: Kahor intaadan horay ugu socon waxa ayaad u malayn waa Soo-jeedintaada Qiimaha Gaarka ah… weydii macaamiishaada hadda ama macaamiishaada! Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto inaysan ahayn waxa aad dhab ahaan u rumaysan tahay inay tahay.
Your qiimeeyn soo jeedin waa inuu ku guuleysto afar shay:
Waa inay tahay soo jiito dareenka booqdaha. Shirkadaadu kamaheleyso natiijooyinka ay kafileyso maal gashigaaga suuq geyn - taasi waa sababta ay dadku ii shaqaaleysiiyaan.
Waa inay noqotaa fududahay in la fahmo. Waxaan la wadaagayaa in xiriirka ganacsi aniga ila leeyahay uu ka hooseeyo qiimaha shaqaale waqti-buuxa ah anigoo bixinaya khibrad tobanaan sano ah.
Waa inay tahay ku kala sooc tartamayaashaada khadka tooska ah. Haddii liiskaaga soo jeedinta qiimaha ay la mid tahay kuwa kula tartamaya, waxaad diirada saartaa mid aysan diiradda saarin. Tusaalahayga, ma nihin hay'ad diiradda saareysa hal kanaal, khibradeyda waxay ku faantaa teknoolojiyad fara badan iyo istiraatiijiyado sidaa darteed waxaan kula talin karaa hoggaamiyeyaasha ganacsiyada sida loo horumariyo ganacsigooda iyadoo lala xiriirayo kheyraadkooda sida loo fulinayo.
Waa inay noqotaa mid soo jiidasho leh oo dhab ah wareejiso go'aanka iibsiga booqdaha. Tusaale: Waxaan bixinaa 30 maalmood u fidinno kafaala-qaadayaasheena tan iyo markii aan aaminsanahay qiimaheena oo aan dooneyno inaan hubino guusha macmiilkayaga.
In warshadaha ganacsiga, waxaa jira dhowr soo jeedin qiimo gaar ah oo gaar ah… xawaaraha gaarsiinta, qiimaha dhoofinta, siyaasadaha soo celinta, dammaanadaha qiimaha hooseeya, amniga macaamil ganacsi, xaaladda saamiga. Kuwaas oo dhammaantood loo adeegsado in lagu kordhiyo kalsoonida oo martida loo keeno iib iyaga oo aan ka tagin goobta iyo isbarbardhigga wax ka iibsiga meel kale. Badeecadaada ama adeeggaaga, waxaad u baahan tahay inaad hal-abuur sameyso… ma tahay kheyraadkaaga? Goobta? Khibrad? Macaamiisha? Tayo? Qiimaha?
Ka dib markaad go'aamiso soo-jeedinta qiimaha gaarka ah, waxaad u baahan tahay inaad kula xiriirto gudaha oo aad si joogto ah ugu dhex gasho farriin kasta oo iib ah iyo suuqgeyn ah oo aad geyso.
Hal tusaale oo weyn waa Xarumaha Xogta Nolosha, a midabaynta midwest xarunta iyo macmiilkeena. Waxay leeyihiin qol ka ballaaran oo lagu cabbiro marka loo eego tartamayaasha kale ee Midwest. Waxaa loo sharciyeeyay xogta sirta ah ee ugu sareysa federaalka. Oo… hadda waxay ka dhisayaan xafiis xafiisyadooda. Isku darka ayaa ah mid gaar ah oo aan iyaga kula shaqeyneyno a goobta iyo dib u naqshadaynta calaamadda taasi waxay si buuxda u koobi doontaa kala duwanaanta!
UVP-gaagu uma horseedi karo magac-bixin dhan nd laakiin waa inay ka muuqataa websaydhkaaga, bulshadaada, iyo goob-jooggaaga raadinta waxa qiimeyntaadu tahay! Waa kuwan faahfaahin wanaagsan oo ka socda QuickSprout, Sida loo qoro Soo-jeedin Qiimo Weyn.
Tags: sida loosida loo qoroinfographicqufulprouttalada qiimaha gaarka ahqiimeeyn soo jeedin
Ma Droplr Aaladda Wadaagista Faylka Ugu Fiican Ayaa La Heli Karaa?
Suugaanta Bulshada: Maareynta Warbaahinta Bulshada ee Shirkadaha Waaweyn, Meelo Badan
Mar 20, 2015 at 5: 06 PM
Tani waa mowduuc muhiim ah. Waxaan u maleynayaa in dad badani ay u maleynayaan inay fahmeen UVP, laakiin waxay ku wareerinayaan bayaanka hadafka. Shaqo fiican, Douglas.
Mar 20, 2015 at 9: 06 PM